दसैँमा खाने होइन त ककटेल ? | Ratopati
दसैँमा खाने होइन त ककटेल ?
बारटेन्डरले यसरी सिकाएका छन् विधि (भिडियोसहित)
personसरिता कार्की exploreकाठमाडौं access_timeअसोज १७, २०७६ chat_bubble_outline0
मधुशालाका पारखीका लागि ककटेल चिरपरिचित नाम हो । नेपालमा पार्टी कल्चर भित्रिएसँगै विभिन्न प्रकारका ककटेल, मकटेल भित्रिए ।
साथीभाइसँगको जमघट, भेटघाट, चाडबाडमा मानिसहरुले रमाइलो गर्ने उद्देश्यसहित ककटेल मकटेलको सेवन गर्ने गर्छन् । त्यसमाथि दसैँ, मेलमिलापको चाड हो । यतिबेला मानिसहरु सँगै बसेर खानपिन गर्ने, रमाइलो गर्ने, तास खेल्ने भनेर दिन नै गनेर कुरेर बसेका हुन्छन् ।
दसैँका बेला मासुको मात्रै होइन, रक्सीको पनि राम्रै व्यापार हुन्छ । आफ्नो पेय पदार्थमा केही सामग्री थपेर वा प्रयोग गरेर स्वादमा फरकपन पाउने उद्देश्यसहित ककटेल बनाइन्छ । ककटेल घरमै पनि निकै सजिलै बनाउन सकिन्छ । के के सामग्री, कति मात्रामा, कतिबेला र कसरी हाल्ने भनेर थाहा भए, हामीले आफ्नै हातले उत्कृष्ट ककटेल बनाउन सक्छौं ।
कुमारीपाटीस्थित आर एण्ड बी स्टेप इन लाउन्जका बारटेन्डर टाइसन मोक्तानले हामीलाई निकै सजिलै ककटेल बनाउने विधि सिकाएका छन् ।
ककटेलको नामः मोहितो
– सुगर सिरप
– पुदिनाको पात
– चार÷पाँचवटा कागती
– पुदिनाको पातलाई हात्केलामा राखेर अर्को हातले हिर्काउने । यसो गरे पुदिनाको गन्ध सबैतिर फैलिन्छ ।
– त्यसलाई खाली गिलासमा हाल्ने
– चारदेखि ६ पिस कागती हाल्ने । पुदिना र कागतीलाई ‘मडल’ गर्ने
– त्यसपछि ६० मिलिलिटर भोड्का हाल्ने, त्यसपछि सुगर सिरप वा चिनी हाल्ने ।
– त्यसपछि आफ्नो इच्छा अनुसार आइस हाल्ने ।
– अन्त्यमा स्प्राइट वा सोडा हाल्ने र राम्रोसँग चलाएपछि रेडी हुन्छ मोइतो ।
ककटेलको नामः फिडेल क्यास्ट्रो
६० मिलि लिटर डार्क खुकुरी रम
१५ मिलि लिटर कागतीको रस
– ६० मिलि लिटर खुकुरी रम एउटा गिलासमा हाल्ने
– त्यसपछि १५ मिलि लिटर कागतीको रस हाल्ने
– त्यसपछि हाल्ने आइस क्युब (आफ्नो इच्छानुसार)
– अन्तिममा फिनिसिङ दिन जिन्जर एले हालेर राम्रोसँग चलाउने